Ra’iisul Wasaaraha oo soo dhaweeyay wakiilka gaarka ah ee Xoghayaha Qaramada Midoobey – SBC
Ra’iisul Wasaaraha oo soo dhaweeyay wakiilka gaarka ah ee Xoghayaha Qaramada Midoobey
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaaliga ah ee Soomaaliya mudane Cabdi Faarax Shirdoon ( Saacid) ayaa maanta Muqdisho ku soo dhoweeyey madaxa hawlgalka cusub ee Qaramada Midoobey ee Soomaaliya Nicholas Kay oo u dhashay waddanka Britain. Waxana uu tilmaamay in hawl-galka cusub ee qaramada midoobey ee Soomaaliya uu kalsooni buuxda siinayo Soomaaliyada cusub.
“Qaramada Midoobey waxa ay bilowday in ay u soo guurto xarunteedii caasimadda Soomaaliya, shaqaduna waxa ay u socotaa sidii loogu talagalay. Waxaad Caalamka u muujiseen in ay suuragal tahay in lala macaamilo Soomaaliya iyadoo ay muhiimad weyn leedahay in aad ka shaqaysaan gudaha Soomaaliya. Waxaan kuugu hanbalyeynayaa masuuliyadan cusub iyo bilaabista hawl-galkan wata waajibaadka cusub” sidaasi ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Cabdi Faarax Shirdoon.
Hawlgalka cusub ee Qaramada Midoobey ee Soomaaliya ee UNSOM ayaa waajibkiisu yahay in uu ka taageero Soomaaliya dhinacyada dhismaha dawladda, sugida ammaanka, sare u qaadida xuquuqda aadanaha , taabo galinta sarraynta sharciga iyo isku-dubbarridka kaalmada caalamiga ah ee Soomaaliya.
“Iskaashiga qaramada midoobey waxaa uu ahmiyad weyn u leeyahay Soomaaliyada cusub. Xiriirkeena soo jiray muddo dheer, waxa uu soo maray xilliyo wanaagsan. Waan soo dhoweyneynaa taageeradaada qorshayaasha dawladdayada ee nabadda, ammaanka iyo dhismaha qarankan. Waxaan dalbanay ka dawlad ahaan siyaasad midaysan oo hal albaab laga galo in Qaramada Midoobay yeelato, waana taas mida xafiiskani suurto galin doono. Ayuu yiri Ra’iisal Wasaaraha oo saxaafada la hadlay kulankii gaarka ahaa ee labada dhinac kadib.
Ra’iisul Wasaarha ayaa dhanka kale sheegay in hawl-galka cusub ee Qaramada Midoobey ee Soomaaliya ee UNSOM uu yimi xilli muhiimad gooni ah u leh taariikhda Soomaaliya.
“Annaga oo heleyna taageerada AMISOM iyo mida saaxiibadayada caalamka, waxaa noo suurto gashay inaa wax badan qabano waqti yar fudihiisn. Adduunkuna waa uu arkay horumarka aan samaynay. Weli waxaa na hor yaalla hawl aad u tiro badan oo ku aadan nabadaynta iyo barwaaqynta dalka. Waan ku faraxsanahay in UNSOM gacan naga siin doonto hja guurl gaarida hadafkeena guud. Waxaan u baahanahay in aan dib-u-dhisno dalkayaga iyo dhaqaalahayaga, inaan xaqiijino in carruurtayadu ay waxbarasho helaan iyo in dadkayagu helaan caafimaad iyo shaqo” ayuu yir Ra’iisal Wasaaruhu.
Dhinaciisana, wakiilka gaarka ah ee Xoghayaha Qaramada Midoobey ee Soomaaliya Nicholas Kay ayaa ka mahadceliyey soo dhoweynta diiran ee ee uu ka helay dhanka dawladda, waxana uu xusay in hawsha UNSOM uu ka balaarnaan doono kii ka horreeyey ee UNPOS. Waxaana wakiilka khaaskaahi cadeeyay in UNSOM ay noqon doono halka laga xiriiriyo hawlaha Qaramada Midoobey ee arrimaha Soomaaliya.